Yini i-PCOS? Izimpawu, izimbangela, kanye nokwelashwa - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Inkampani, The Checkout Umphakathi Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani Inkampani, Izindaba Umphakathi, Inkampani Izidakamizwa Vs. Umngani Izilwane Ezifuywayo Izindaba, Wellness Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izindaba Imfundo Yezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Yini i-PCOS?
Ngenkathi uMick Jagger esibonisa ukuhamba kwakhe, mina nomngane wami sasicula-sihuba kanye nomculo futhi sithatha umbukwane. Futhi kwenzeka. Isandla sami sangihlikihla esilevini, futhi ngezwa lezo zinwele zokuqala ezinoboya. Ngangineminyaka engu-14; Ngangivele ngiqale ukushefa imilenze yami… ngingaba nezinwele ezikhulayo ebusweni bami? Ngichithe yonke enye ikhonsathi ngenkuthalo ngihlwitha umhlaseli wekota-intshi ngenkathi uMick ekhala ngokungakwazi kwakhe ukwaneliseka. Lokhu bekuyiseluleko sami sokuqala enganginaso i-polycystic ovary syndrome (PCOS), inkinga ejwayelekile yehomoni phakathi kwabesifazane abaneminyaka yobudala bokubeletha.
I-PCOS yisimo se-hormonal esibandakanya izinhlelo ze-endocrine nezinqubo zokuzala. It kuthinta phakathi kuka-5% no-13% yabesifazane abaphakathi kweminyaka eyi-15 nengama-44 ubudala, futhi kungadala amaqanda akhulisiwe noma ama-cysts amancane ama-ovarian. Kwakungemva nje kokutholakala kwami ​​njengomuntu osemusha osekhulile lapho engathola khona ukuthi bangaki abanye besifazane empilweni yami abanesimo esifanayo. Kuvame kakhulu kunalokho abesifazane abaningi abakubonayo.
Yiziphi izimpawu zokuqala ze-PCOS?
Izimpawu ze-PCOS zingahluka kuye ngomuntu. Umuntu one I-PCOS ingabonisa okunye noma konke okulandelayo:
Izikhathi zokuya esikhathini ezingajwayelekile, kufaka phakathi ukungayi esikhathini, izikhathi zokuya esikhathini ezingaphenduli njalo, ukopha kakhulu, noma ukopha ngaphandle kwe-ovulation
Isisindo noma ukukhuluphala
Kunzima ukunciphisa umzimba
Izinkinga zokuzala noma ukungazali
Ukukhula kwezinwele ngokweqile ezindaweni ezinjengobuso, isifuba, isisu, noma amathanga — kwesinye isikhathi okubizwa nge-hirsutism
Izinduna, ikakhulukazi uma zinzima, ukuqala kwesikhathi, futhi / noma zingaphenduli kahle ekwelashweni kwamakhasimende
Ama-Acanthosis Nigricans (amabala wesikhumba esimnyama, esijiyile, nesivelile),ezitholakala emiboshweni yentamo, emakhwapheni, emgodini nakwezinye izindawo
Yini ebangela i-PCOS?
Imbangela ye-PCOS ayaziwa, kuchaza U-Ann Peters , MD, udokotela wezifo zabesifazane nodokotela ohlinzayo esikhungweni i-The Gynecology Centre eMercy Medical Center eBaltimore, eMaryland. I-PCOS yisifo esiyinkimbinkimbi okukholelwa ukuthi siyingxenye yokuzalwa (ifa) nengxenye yemvelo. I-PCOS ingasebenza emindenini. Cishe isiguli esisodwa kwezine ezine-PCOS sinomama obekutholwe ukuthi une-PCOS futhi (kwezinye izifundo le nombolo iphakeme kakhulu).
Ngenkathi kusolwa izici zofuzo nezemvelo, UGeoffrey Cly , MD, i-OB / GYN eFort Wayne, e-Indiana, ikhombisa ukuthi azikho izifundo eziveze ngokusobala ukuxhumana kwezakhi zofuzo noma into ethile yezemvelo ebangela i-PCOS.
Njengoba kwenzekile kimi, i-PCOS ivame ukukhula ebusheni, kepha uDkt. nokuvuthwa kwesibeletho.
Amaphilisi okulawula ukubeletha angafihla izimpawu futhi abangele imiphumela yokuhlola enganembile, edala ukubambezeleka phakathi kokuqala kwe-PCOS nokuxilongwa. I-PCOS ingahle ingatholakali kuze kube yilapho iziguli ziyeka izindlela zokulawula ukubeletha noma zibona izikhathi ezingavamile njengoba zizama ukukhulelwa, kuchaza uDkt. Peters, enezela ukuthi kwezinye izimo i-PCOS ivela kamuva empilweni — ikakhulukazi kwabesifazane abathole isisindo ngokulandelana phakathi neminyaka yabo yobusha nasebusheni 20s.
Umtholampilo waseMayo ibalula amazinga aphezulu e-insulini-i-hormone elinganisa amazinga kashukela egazini, ukukhiqizwa ngokweqile kwe-androgen, nokuvuvukala osezingeni eliphansi njengezinto ezinobungozi ezingaba nendima ku-PCOS, kepha kuze kube manje imbangela ngqo ayaziwa.
Ingabe i-PCOS ibucayi?
Ngenkathi ezinye izimpawu ze-PCOS, ezinjengezinwele ezeqile noma izinduna ziyizinkinga zezimonyo, i-PCOS ihlotshaniswa nezinye izinkinga zempilo ezibucayi.
Abesifazane abane-PCOS basengozini enkulu yezinkinga eziningi zezokwelapha, kusho uDkt. [Lokhu kubandakanya] i-metabolic syndrome (iqoqo lezilonda ezihlanganisa umfutho wegazi ophakeme, ukungajwayelekile kwe-lipid, nokukhuluphala), ukumelana ne-insulin kubhangqwe ngamazinga aphezulu ohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, isifo senhliziyo, ukungabi nenzalo, nesizalo / endometrium[ulwelwesi lwesibeletho]umdlavuza.
lithini inani eliphephile le-melatonin okufanele lithathwe
Ezinye izinkinga zingafaka i-apnea yokulala, i-steatohepatitis engeyona i-alcoholic (ukuvuvukala okukhulu kwesibindi okubangelwa ukuqongelela kwamafutha esibindini), isifo sikashukela sokukhulelwa, nokukhulelwa kwesisu noma ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Lokhu akusho ukuthi bonke abesifazane abane-PCOS bazothuthukisa lezi zimo, kepha ukwanda kwengozi yezempilo kusho ukuthi ukwelapha i-PCOS kubalulekile. UDkt. Peters ukhomba ukuthi i-PCOS iyisifo esizohlala impilo yonke.
I-PCOS nayo ingathinta impilo yengqondo. Ukudangala nokuphazamiseka ngokomzwelo [yizindaba] ezibalulekile okungafanele ziyekwe zingalashwa ngokwelulekwa, ukwelashwa kweqembu, kanye / noma imishanguzo lapho kudingeka, uDkt Cly uthi.
Ucwaningo igadwe nguprofesa waseColumbia University of Nursing uNancy Reame, MSN, Ph.D., futhi yashicilelwa ku Ijenali Yezinsizakalo Zezempilo Yokuziphatha Nocwaningo ithole ukuthi ukungajwayeleki kokuya esikhathini kwakuyisifo esihambisana kakhulu nezinkinga zengqondo.
I-PCOS itholakala kanjani?
Isinyathelo sokuqala ukubona umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo. Udokotela wakho jikelele uyindawo enhle yokuqala. Ngokuya ngezimpawu zakho nokwelashwa okudingekayo, i-GP yakho ingakuthumela ukuthi uyobonana nodokotela wezempilo wabesifazane noma abanye ochwepheshe abanjengo-gynecologist, i-endocrinologist, kanye / noma udokotela wesikhumba.
Udokotela wakho angakubuza mayelana nezimpawu zakho nokuthi sebekhona isikhathi esingakanani, nokuthi iyiphi imithi oyiphuzayo. Bangakuthumela futhi ukuhlolwa kwegazi, ikakhulukazi ukuhlola amazinga aphezulu we-androgen,okungukuthi i-testosterone(i-hormone yabesilisa).
I-ultrasound yokuhlola ama-cysts ama-ovari nayo ingase yeluleke. Abesifazane abangenayo i-PCOS nabo bangaba nama-cysts, kepha ngaphansi kuka-12 abahlangabezani nenqubo yokuxilongwa, kubhala UDkt Jessica Chan, uprofesa osizayo we-Obstetrics and Gynecology eCedars-Sinai kanye ne-endocrinologist yokuzala onolwazi kwi-PCOS.
UDkt Chan ubuye aveze ukuthi abanye besifazane abane-PCOS kungenzeka bangabi nawo ama-cysts. Ngawela kulo mkhakha ngesikhathi sokutholakala kwami ​​nangeminyaka eminingi ngemuva kwalokho. Udokotela wami wangichazela ngaleso sikhathi ukuthi ngoba i-PCOS iyi-syndrome, ama-cysts ama-ovarian awadingi ukuba khona ukwenza ukuxilongwa kwe-PCOS uma kunezinye izimpawu.
kuthatha isikhathi esingakanani i-diflucan ukwelapha ukutheleleka kwemvubelo
UDkt Chan ubala inqubo yokuxilongwa kwe-PCOS njengokwethula ngokulandelayo noma ngaphezulu kokulandelayo:
Izikhathi ezingajwayelekile, ezisindayo, noma ezingabanjwanga ngenxa ye-ovulation engabanjwanga (lokhu kungaba yimbangela yokungabi nenzalo)
Izimpawu zamazinga aphezulu kune-evamile we-androgens, angafaka izinwele zomzimba ezeqile ezindaweni lapho amadoda ekhula khona izinwele (ubuso, isifuba, emuva, njll.), Noma ukulahleka kwezinwele. Amazinga e-Androgen nawo angahlolwa nge-bloodwork.
Ama-cysts ama-ovarian ayi-12 noma ngaphezulu (amakhudlwana kunama-follicles amaqanda ejwayelekile) njengoba kukhonjisiwe nge-ultrasound.
Uhlu lwezivivinyo lujwayelwa ukukhishwa ngaphandle kobukhona bezinye izinkinga zehomoni.
Ingabe i-PCOS ingalapheka?
Ngeshwa, alikho ikhambi le-PCOS, kepha lokho akusho ukuthi abantu abatholakale benaleso simo kumele bahlupheke. Izimpawu ze-PCOS zilawulwa ngempumelelo ngemithi nangokushintshwa kwendlela yokuphila, kuchaza uDkt. Ngisho nokuzala okutholwa yiziguli ze-PCOS kunganqotshwa ngempumelelo ngemithi yokwelapha.
Iphathwa kanjani i-PCOS?
Izimpawu ze-PCOS ziphathwa ngendlela eyodwa noma inhlanganisela yezindlela ezintathu: ukuguqulwa kwendlela yokuphila, imithi, kanye (nokuqabukela) ukuhlinzwa.
Izinguquko zokuphila kanye nokwehla kwesisindo kuyizinto eziyinhloko ekwelapheni i-PCOS, kusho uDkt.
Ukwehla kwesisindo nokudla okunempilo yizona zindlela zokwelapha ezisebenza ngempumelelo ezingezona ezokwelapha, kunanela uDkt Cly, enezela, Ukuthuthuka kwe-PCOS kuqala ngokuncipha kwesisindo esingaphezu kuka- 5% wesisindo somzimba sisonke. Ukuthuthuka kwezimpawu kukhulu kakhulu ngokulahleka kwesisindo okuningi.
Esihlokweni sakhe seCedars-Sinai, uDkt Chan uncoma iziguli ezine-PCOS ukuthi zihlale zikhuthele, kufaka phakathi imizuzu engama-30 kuya kwengama-40 yokuzivocavoca izinsuku ezintathu kuya kwezine ngesonto. Ubuye futhi asikisele ukwamukela ukudla okune-carbohydrate ephansi. Abesifazane abane-PCOS abahlali njalo becubungula ama-carbohydrate njengabanye besifazane. Ama-carbohydrate amaningi acwengekile njengoshukela angaholela ekumelaneni ne-insulin nokuzuza kwesisindo, usho kanjalo.
Imithi ejwayelekile kakhulu yile amahomoni okulawula ukuzalwa ngesimo samaphilisi noma isichibi noma indandatho, kusho uDkt. Cly, ngoba lezo zilawula imijikelezo yokuya esikhathini… futhi zinciphisa nenani le-testosterone ejikelezayo ngakho-ke kuzosiza nokukhula kwezinwele.
I-Metformin , umuthi osetshenziselwa ukulawula kakhulu ushukela kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2, neminye imishanguzo yesifo sikashukela kwesinye isikhathi ibekelwa i-PCOS ngoba yehlisa ukumelana ne-insulin.Isetshenziswa njengomuthi ongekho kwelebula njengoba i-Food and Drug Administration (i-FDA) ingazange ivume ukwelashwa kwe-PCOS ngoba umenzi akazange afune ukuvunywa kwayo; kepha ngemininingwane emihle yocwaningo lomtholampilo, umuthi osetshenziswa kakhulu.UDkt Cly akabancomi ngoba izifundo zesikhathi eside azikhombisanga nzuzo enkulu. UDkt. Cly ucacisa okuhlukile, kepha-ke, lapho owesifazane ezama ukukhulelwa engeza i-metformin ku-Clomid noma i-Femara izokwandisa amathuba akhe okukhulelwa izikhathi eziphindwe kathathu kunaleyo (ngemithi evuselela ama-ovulation) i-Clomid / Femara iyodwa.
OKUSHIWO: Usebenzisa iMetformin ukwelashwa okungekho kwelebula kwe-PCOS
UDkt Cly noDkt. Peters bobabili bayasho spironolactone njengokusebenza wedwa noma kuhlanganiswe neminye imithi yokwehlisa amazinga ama-hormone wesilisa; kodwa uDkt. Cly uxwayisa ngokuthi, kunengozi, engavamile yokungahleleki kwezitho zobulili ezinganeni zesilisa uma owesifazane ekhulelwa ngenkathi eyithatha.Ngakho-ke, iziguli kufanele zisebenzise ukuvimbela inzalo nokuhlolwa kwegazi ukuqapha ama-electrolyte adingeka njalo.
Ngezinwele ezingafuneki, uDkt. Peters usikisela ukhilimu we-eflornithine hydrochloride (umuthi ongundabuzekwayo ongasetshenziswa ukuvimbela ukukhula kwezinwele) njengenketho ngaphezu kwezindlela zokususa izinwele ezifana nokufaka i-waxing, shaving, noma i-electrolysis / laser ukususwa kwezinwele.
UDkt. Peters ubuye abike ukuthi izinkinga eziphezulu ze-cholesterol, isifo sikashukela, i-apnea yokulala, nesifo esinamafutha sesibindi, izimo ezivame ukuvela kubantu abane-PCOS, ziphathwa ngendlela efanayo ebingaba ngayo kumuntu ongenayo i-PCOS.
Ngezinkinga zokuzala, ngaphezu kwemithi eshiwo nguDkt Cly noDkt Peters, udokotela wakho angancoma i-letrozole noma i-gonadotropin.
Letrozole kubambezela ukukhiqizwa kwe-estrogen futhi kubangele umzimba ukuthi wenze i-hormone ekhuthaza ama-follicle amaningi (i-FSH), i-hormone edingekayo ye-ovulation. Ngenkathi i- Ucwaningo olusekelwa yiNational Institute of Child Health and Human Development ithole ukuthi i-letrozole isebenza kangcono kune-clomiphene ekubangeleni i-ovulation nasekuthuthukiseni amazinga okuzalwa bukhoma, izifundo ze-letrozole ezilwaneni zikhombisile ukuthi ibangela ukukhubazeka kokuzalwa uma isetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa. Akuzange kube nezifundo zalesi sidakamizwa kwabesifazane abakhulelwe.Kubuye kube ukwelashwa okungekho kwelebula.
Ama-gonadotropin ama-hormone abangela i-ovulation. Banikezwa njengemijovo. Ngoba lokhu kwelashwa kunengozi enkulu yokukhulelwa okuningi, udokotela wakho angalawula izivivinyo eziningi nama-ultrasound ukuqapha umzimba wakho ngesikhathi sokwelashwa.
I-PCOS ayikwazi ukulungiswa ngokuhlinzwa, kepha okunye ukuhlinzwa kungasiza ngezimo ezithile ze-PCOS.
Ukukhuluphala ngokweqile, isifo sikashukela, kanye ne-metabolic syndrome, ezimweni ezimbi kakhulu, kungalawulwa ngokuhlinzwa kwe-bariatric, kusho uDkt.
UDkt. Cly uyanezela, Abesifazane abalahlekelwa isisindo esikhulu ngemuva kokuhlinzwa ngokudlula esiswini babonisa izikhathi ezijwayelekile nokujwayela izimpawu zabo.
Ukubhola kwe-ovari kuyindlela yokwelashwa yokungazali okuhambisana ne-PCOS. Ucwaningo lwakamuva lukhombisile ukuthi iLaparoscopic Ovarian Drilling, i-LOD, (isusa ezinye zezicubu ze-cystic ovarian) kubangela izinga eliphakeme lokukhulelwa uma uzama ukukhulelwa uma kuqhathaniswa ne-clomid iyodwa, kusho uDkt Cly. Noma kunjalo, isifundo sakamuva kakhulu ukuvezile lokho uFemara(ilerozole)bekusebenza njengokuhlinzwa kwe-LOD ekufezeni ukukhulelwa. Ngokwengeziwe, ukuhlinzwa akusizi ukuthuthukisa izimpawu noma ukutholwa kwe-PCOS lapho owesifazane engazami ukukhulelwa.
Yini ethembisa nge-PCOS?
Ngenkathi i-PCOS ingahle ibe nawe impilo yonke, izimpawu akudingeki ukuthi zibe njalo. Imithi yokwelashwa iphumelela kakhulu ekucindezeleni izimpawu, kuqinisekisa uDkt Cly.
UDkt Chan unikeza nesiqiniseko : Uma usuqedile ukuya esikhathini, ama-hormone e-estrogen ne-testosterone ehla ngokwemvelo, bese izimpawu ze-PCOS zingathuthuka. Khumbula ukuthi esigabeni ngasinye senkinga, yize singeke siyelaphe, singakwazi ukuphatha izimpawu.
can advil kanye ne-tylenol kungathathwa ndawonye
Izifundo ezizungeze i-PCOS ziyaqhubeka nokunika ithemba. Kuhle ukwazi ukuthi kunezimpendulo eziningi eziphenywayo futhi ngethemba ukuthi kuzoba khona ikhambi le-PCOS esikhathini esizayo esingekude kakhulu, kusho uDkt Cly.
Ngisenayo i-PCOS futhi ngisadinga ukuphatha ezinye zezimpawu zami. Nginabafana ababili abahle engabakhulelwa ngaphandle kwesidingo sokwelashwa kokuzala, kanye necebo elikhona lokulawula noma ukuvimbela imiphumela eminingi ye-PCOS ngangokunokwenzeka. Ukuxilongwa kwe-PCOS kungasabisa-okwesabekayo njengokuthola izinwele zesilevu ekhonsathini yeRolling Stones - kepha kuvamile, kuyalawuleka, futhi kungenzeka ukuthi uphile impilo ephelele, enempilo ne-PCOS.
Ungabhekana kanjani nokukhathazeka ngo-2020
Izidakamizwa ezithandwa kakhulu kuSingleCare ngoJulayi
Okufanele ukwazi mayelana nezinguquko ze-Medicare kulo nyaka
Izeluleko ezi-5 zokubuyela esikoleni zonyaka wezifundo onempilo
Ukugwema i-‘September Spike ’yezimpawu zokungezwani komzimba nezesifuba somoya
Ngabe kuphephile ukuthatha i-ibuprofen neTylenol ndawonye?
Ukuvimbela ukusetshenziswa kabi kwemithi kadokotela
Imiphumela emibi ye-Adderall nokuthi ungayigwema kanjani
Ungayenza i-Vyvanse ihlale isikhathi eside?
Ama-Proton pump inhibitors (ama-PPIs): Ukusetshenziswa, izinhlobo ezivamile nolwazi lokuphepha
Kuyini Okujwayelekile, Kwesiko & Kunengqondo (UCR)?
ibiza malini i-stendra ngephilisi ngalinye?
Ngingathola umkhuhlane ku-walmart
yini i-mobic 15 mg esetshenziselwa
yimuphi umuthi ongcolile wokungezwani komzimba nempova
indlela yokwelapha indlebe ekhaya
kungani kufanele uthathe i-montelukast kusihlwa?
ungakwazi yini ukwelapha i-uti ekhaya
Umphakathi, Ukuphila Kahle